I-Aspire: I-Influencer Marketing Platform For High-Growth Shopify Brands | Martech Zone
Uma ungumfundi oshisekayo we Martech Zone, uyazi ukuthi nginemizwa exubile ukumaketha kwamathonya. Umbono wami nge-influencer marketing akukhona ukuthi ayisebenzi… ukuthi idinga ukuqaliswa nokulandelelwa kahle. Kunezizathu ezimbalwa zokuthi kungani:
Thenga Ukuziphatha - Abathonya bangase bakhe ukuqwashisa ngomkhiqizo, kodwa hhayi ngempela ukukholisa isivakashi ukuthi sithenge ngempela. Leso yisimo esibucayi… lapho umgqugquzeli engase anganxeshezelwa ngendlela efanele noma ukuthengiswa komkhiqizo kungekho lapho inkampani ifisa ukutshala imali eyengeziwe.
Momentum - Njengoba ngisebenze nemikhiqizo esikhathini esidlule, ngiyazi ukuthi kwakuthatha izinyanga ngezinye izikhathi ukufudumala umphakathi wami ukuze uthole isixazululo. Uma izinkampani zingayiboni imiphumela esheshayo, zivame ukugijima. Ngibe nemiphumela emihle ngemikhiqizo esebenze nami unyaka noma ngaphezulu… kodwa leyo efuna nje ukwenza uhlolo olu-1 nolwenziwe ayisebenzi.
Tracking - Kulolonke uhambo lwamakhasimende, kuneziphetho ezihlukene… futhi akuzona zonke ezingalandelelwa emuva emsebenzini wami njengomgqugquzeli. Ngingase ngikhulume uhlobo ekwethulweni noma ku-podcast futhi izethameli zami ngeke zisebenzise i-URL yangokwezifiso, ikhodi yesaphulelo, noma zingene lapho zizwe khona ngomkhiqizo. Enkampanini, kubonakala sengathi angizange ngidlale. Futhi, kuyangikhathaza ukuthi angizange ngithole isikweletu.
I-Ecommerce imboni emangalisayo ongasebenza kuyo ngoba uhambo lwemikhiqizo eku-inthanethi ngokuvamile luyifaneli ehlanzekile. Lokhu kuyiqiniso ngokumaketha kwe-influencer ku-ecommerce futhi. Kungakho kukhona abasebenzisi be-YouTube abenza izigidi zamaRandi ngonyaka emathubeni okuthengisa anamandla… baphonsa isixhumanisi encazelweni yombukiso futhi izinkulungwane zabalandeli babo zingase zengeze umkhiqizo ekalishini labo. Ngakho konke ukuchofoza nokuguqulwa okulandelekayo, kokubili umkhiqizo kanye nomgqugquzeli bajabule kakhulu ukusebenzisana ukuze baqhubekisele phambili ukuqwashisa nokuthengisa.
Ubhubhane selususe ingxenye enkulu yezimpilo zethu ku-inthanethi, kusukela endleleni esixhumana ngayo kuya endleleni esithenga ngayo. Eqinisweni, i-IBM isanda kubika ukuthi ubhubhane lusheshise ukushintshela kwe-e-commerce cishe iminyaka 5.
I-IBM's US Retail Index
Namuhla, imiphakathi yedijithali ebusa umhlaba wezohwebo kanye nemikhiqizo isiqala ukubona inani elandayo lokutshala imali kubagqugquzeli - osaziwayo abancane benkundla yezokuxhumana abaye bathola ukwethenjwa yizithameli zabo namandla okuguqula imibono yabo kanye nezinqumo zokuthenga.
Kungani Ukumaketha Kwethonya?
Kunezinzuzo ezibalulekile zokusebenza nabathonya kanye nokwakha amanxusa omkhiqizo:
Izincomo eziyiqiniso – Uma inxusa liwuthanda ngempela umkhiqizo, uzothumela ngalolo mkhiqizo izikhathi eziningi - ngezinye izikhathi ngaphandle kokuba kube okuthunyelwe okungu-#okuxhasiwe - kunikeze ubufakazi bomphakathi.
Izethameli Ezihlukahlukene - Inxusa ngalinye linethonya emphakathini walo. Bamele abathengi abaqondisiwe bomkhiqizo ngamunye futhi bakhulume ngomkhiqizo ngendlela ehlobene.
Ukukhiqizwa kokuqukethwe - Ngenxa yokuthi abagqugquzeli bathuthukisa okwabo okuqukethwe, ungakwazi ukukala ukuthuthukiswa kokuqukethwe kwakho kweziteshi eziningi ngendlela ofisa ngayo... ugxile kubagqugquzeli abamele kangcono umkhiqizo wakho.
Ukuphathwa Kwemicimbi - Abathonya sebevele batshala imali eningi emicimbini ebukhoma nasekusakazweni, behlinzeka ngamathuba ayingqayizivele naseduze okukhombisa umkhiqizo wakho kubabukeli babo.
Izindleko Eziphansi Ngokutholwa ngakunye - Amanxusa omkhiqizo anika amandla amabhrendi ukuthi athole okuthe xaxa ngemali encane, njengoba amabhrendi engakwazi ukungena kumanani amanxusa ngaphambili ukuze ashintshisane ngobudlelwane besikhathi eside.
oluqoqiwe - Amanxusa omkhiqizo ngokuvamile avuma ukukhethekile kumkhiqizo ophakathi kwaleyo mboni, okuvumela izinkampani ukuthi zilawule isikhala sesikhangiso kokuphakelayo kwazo.
I-Aspire: I-Influencer Marketing Ihlangana ne-Ecommerce
I-Aspire iyinkundla yokumaketha enethonya eyakhelwe i-ecommerce. Ipulatifomu inikeza:
I-Influencer Discovery - ikhono lokusesha nokuxhumana nabagqugquzeli abangaphezu kwezigidi ezingu-6, abalandeli bomkhiqizo, ochwepheshe bomkhakha, nokuningi ngokuchofoza inkinobho.
Ukuphathwa Kobudlelwano - phatha kahle imikhankaso yabathonya, izinhlelo ezisebenzisanayo, ukutshala umkhiqizo, nokunye okwengeziwe - ngaphandle kwemikhawulo.
Ukuthumela ngokuzenzakalelayo nokulandelela - abagqugquzeli bemikhumbi imikhiqizo abayifunayo futhi babelane ngolwazi lokulandelela - ukuthatha zonke izinqubo ezenziwa ngesandla ezandleni zakho.
Amaphromoshini - Inqwaba yakha amakhodi ephromo e-Shopify ayingqayizivele kanye nezixhumanisi ezihambisana nawo wonke umuntu onethonya, ngaphandle kokushiya inkundla.
I-ROI elinganisekayo - kala imbuyiselo kuhlelo lwakho lwethonya ngokuchofoza, ukusetshenziswa kwekhodi yephromo, noma ukufinyelela. Xoxa indaba egcwele yokuthi abagqugquzeli bakuqhuba kanjani ukukhula kwesikhathi esifushane nesikhathi eside.
Ukudalwa kokuqukethwe - Letha ukuthinta komuntu eziteshini zakho zokumaketha ngokuqukethwe okunethonya okukhiqizwa ngokushesha, okungabizi, nokuhlukahluka. Bese uthuthukisa izikhangiso ukuze wakhe i-buzz eyengeziwe.
Shopify Ukuhlanganisa - Thola ukuhlanganiswa kwe-Aspire's Shopify ukuze uthole okuhlangenwe nakho okwenziwe ngokwezifiso ongavuka futhi usebenze ngemizuzu, okuhlanganisa ikhono lokuthumela nokulandelela imikhiqizo noma amaphromoshini.
Bhukha iDemo ye-Aspire
Tags: amanxusa omkhiqizoizindleko ngokutholwa ngakunyeukumaketha kwamathonyaipulatifomu yokuthengisa enomthelelaukuthonya amasu wokumakethaukulandelela ukumaketha kwethonyaUkuphathwa kobudlelwano obunomthelelaukulandelela umgqugquzeliamakhodi wephromothengashopify ukuhlanganiswa